Last updated: Jan. 05 2018 | 5 min akhri
Markii ugu horeysay ee aan la kulmay saaxiibkay, Christopher, shan sano ka hor, Waxaan u lahaa mid ka mid ah labada nin ee kabaha guri oo kaliya - kabaha scuffed ka college. Fikirka dib on my waayo-aragnimo undergraduate, Waxaan shaki waxaan kulligood ku soo xirtay 10 times, sida u gaddoomaysaan sare u qaadeen ugu socdaalada aan si oo ka fasalka haddii aan hal inji oo baraf ah dahaarka campus, at taas oo tilmaamaysa waxaan isku hallaysay waslad. Waa hagaag, Waxaan embellished dambaysta ah (xoogaa.) Gabar A gabadhnimo si kasta, Anigu ma aan aqoonin sida loo sameeyo duluca quruxsan ama dareento raaxo leh oo tusaya inaan wejigayga aan maaskaro qurxiyo a, oo aan marnaba jeerba labiska this. Laakiin waxaa sameeyey, oo waxaan rajeynayaa in uu sameeyo dumarka kale, sidoo.
Ma aha in ay jiraan wax qalad ah la isku qurxiyo iyo stilettos - iyaga ku raaxaystaan! Just ha ku xiran tahay iyaga on. Marka aan eegno wargeysyada iyo daba jog ah si joogta ah warbaahinta oo inagu wareegsan, Waxaan ma aha inay la yaabanahay sababta ay dumar u badan yihiin dhul gariir waaxda kalsoonida. Waxaan kula wadaagi casharada soo socda Waxaan bartay ka Saaxiibadayda feline iyo nin si toos ah-toogashada ee noloshayda:
1. Misna aad calaamad ah shaqsi: On mid ka mid ah taariikhaha ugu horeysay xagaaga kula Chris, Waxaan hadalladaas ku saabsan sida ka muuqanaysa wax baan fiiriyey oo billaabeen inay is-megdeeye. Marka waxaan idinku leeyahay cirro Waxaan ahay, Waxaan ula jeedaa anigu ahay weel alabastar ah oo xuduud la translucent, sidaas this degdeg arin keentay in ahayn ma aha oo xariijimo of orange iyo shaleyte. Markii uu (og) warsan haddii aan hore usoo saaray is-megdeeye, Anigu nadiif baan yimid (inkasta oo aan in dareenka suugaan, sida in muddo isbuuc ah oo exfoliation lug.) Wuxuu i weydiiyay sababta aan u samayn lahaa in ka fiirsaneysa waxaan lahaa midab ah maqaarka qurux badan oo dhif. Weligay lahaa maqlay qof tixraac aan maqaarka jidkaas, iyo waxaan dareemay sidaas doqon ah ee isku dayaya in la beddelo wax u gaar ah oo leh taran ka urin macdan ah iyo dhar hurdo iyo dhar cad tashuush ku tagay.
Ururda wadashaqayn naga rabto in aad eegto waxaan bashar, oo waa in aynu doonaynaa in aynu, sidoo. Waa la mid ah isagoo photo profile shukaansi lagu eego wax aad sida, photoshopped ee la soo dhaafay hal dhibic ka mid ah aqoonsiga. Waxaan nahay oo dhan u gaar ah, iyo waxyaalaha uu ka samaysan yahay ayaa sidoo kale noo kala duwan nagu dadkii badnaa ka taagan. Raadi kalsoonida si ay u muujiyaan in aad calaamad dhabta ah iyo inaanad damcin dadka kale '.
Sida bisadaha, isku heysta run. Calico A waxaa mar dambe si qurux badan calaamadeeyay badan tabby - waa dhan in indhaha ka.
2. Ma beertid jidhka ceeb: Laba ka mid ah bisadaha my yar yar yihiin, laba ka mid ah dhisayo celcelis, iyo laba iyo kuwo waaweyn. Waxay ha u ogaado. My cat ugu weyn ee ka bootin on bisadaha uu size kala bar iyo yaababkii sababta ay ugu faraxsan leh taariikhda legdinta play ah. Haddii dumarka oo kaliya joojin aan labada quudhsadaan jirka ayeey u qaab daran oo loo fududeeyo. Waxaan ku yimaadaan cayn kasta oo qaabab iyo qiyaaso, oo weli waan maqli badan oo kamid ah saaxiibada aan ku tago oo ku ayna duleella jidhka ku saabsan gartay. fikradaha Kuwan waxaa ka dibna ay weheliyaan cabsi ku saabsan sida rag u arkaan jidhkooda oo u qalma in lagu daydo Secret Victoria ee. noocaas ah ee is-hadal keenaysaa in guud ee aan ka sameyno ma aha oo kaliya jirkeena u gaar ah, laakiin meydadka guud. Waxaan dhiibi marka aan maqlo xigashooyin sida, "Haweenka Real yihiin curvy." Haweenka Beautiful iman diyaariyeen ah ee qaababka, si aynu u qabsanaysaa wax kasta oo tirada na arka in foomka our caafimaad. Ragga Ma doonayo in aan maqlo noo jeexi gooni jirkeena, oo aynu wada-aad-marar badan ku riday xaalado ay ku guulaysan karin, iyadoo aan loo eegayn jawaabahooda. Kate Upton, Kate Winslet, iyo Kate Moss ayaa dhamaantood kala duwan dhistaa, laakiin kuma dhammaan adduunka loo arko qurux badan?
Markii ugu dheer, Anigu ma istaagi karin in lugaha iga ayaa ku eekaan-dhuuban, sidaas qiyaasi aan la yaab leh marka Chris ii sheegay in uu jecel yahay lugaha iyo talinayaa in aan xirto gaab iyo daraftiisa more. Qofka xaq u doonayaa inuu jeclaan jidhkaaga oo aan kugu qasbi si ay u qaabeeyo. Had iyo jeer xasuuso in.
3. Ku raaxayso cunto: Ah, badhaadhaha ee kuula dhaqmo. Marka waan gariirin bac in enticement, oo dhan lix ka mid ah bisadaha aan hore u soo dalici cagaha ii at. Waxay jecel yihiin cuntada illaa iyo heer ay waa dhacdo. Bal yaa iyaga ka canaanan karaan? Like haween badan, Waxaan la dagaallameen cunto sidii aan gaaray ceebta jidhka kor ku xusay ee aan dareemayo dhammaataan svelte in Jeexitaanka a. Waxaan shan mina more miisaantaan haatan ka badan marka Chris oo aan marka hore la kulmay, laakiin beddelkeeda in, Waxaan badan oo pizza isaga la wadaago inta lagu guda jiro Friday binges TV habeenkii. Waxaan ku ganacsan lahaa kuwa tiro kasta oo ku saabsan baaxadda. Waxaan fog ka raaxo badan la jidhkayga ugu ahay 31 badan ayaan abid ahaa in aan dhalinyarada.
Cunista caafimaad leh waa wax la yaab leh, oo waxaan ahay Mu'min si adag in daryeelka baxo uuna isku mid ah (hoos ka eeg.) Raaxaysan nolosha oo dhan, dhadhan ay, inkasta oo, waa wax quruxsan weyn, sidoo. Ha diiradda aad u badan oo ku saabsan qaadashada calorie in aad waayi track of riyaaqayaa hadhuudhka ah - iyo wadahadalka in uu weheliyo,.
4. Is ogow naftaada: Marka bisadaha waa daal, waxay seexan. (Waxa ay dhammaan ahaanba daallan, by Jidka.) Marka bisad kale dhibto ama weerara meel loo qoondeeyey, ma haystaan ​​wax diidan in iskama dilayo. Sidaas daraaddeed marar badan, waxaan ku adkaysato in ka badan hadlayay maankiinna, ama aynu ha qof naga dhaqmaan qaab in aynaan daweeyo lahaa qof kale. Cats, iyo ragga, amar ah in, leedahay u janjeera in ay ku foodhyaan oo ay si weyn ula, sidaas dhaqaaqin noloshooda oo aan haystan on si xanaaq ama qadhaadh. Waxay inta badan ma qaadan wax shaqsi ahaan, oo iyagu og yihiin in ay fiican tahay inaad dareen run ah oo aad tusto ka badan si ay u fuliyaan on ficil iyo qarxiyaan dambe.
Daacadnimo waa muhiim in xiriirka, iyo qofka saxda ah ee aad u jeclaan doonaa xitaa marka aad ka yar tahay xukumay shan sano in ay dunida ka baxsan. Haddii aadan ka hadli karin waxa aad dhabtii doonaysid, Haddaba sidee lammaanahaaga idin siinayaa inay?
Tani waa mid ku adag, gaar ahaan kuwa ku jahaaday xagga agreeableness oo naga mid ah. Haddii ay wax caawimaad ah, isku day in aad ka fikirto wax ereyada hab in aadan qaadan lahaa dembi at haddii ay kugu yidhi. Sidaas, aad leedahay waxa aad u malaynayso in aan haysan si ay u lumiya hurdo badan arrinta. In badan oo aad waxan u samaynaysaan, ayaa in ka badan si dabiici ah waxay noqon doontaa in aad. In aan guriga, foodhyo iyo purring yihiin labada dhawaaq caadi ah, oo labadoodiina waxay tilmaamayaan nooc ka mid ah ixtiraamka: dadka kale iyo nafteena.
5. Ka jira xilligan: Waxaan mar walba la yaabay sida bisadaha aan daawado shimbiraha iyada oo diiradda la mid ah sida Chris ciyaaraa kulan video. odhaahda jir ah joojinta inuu ku udgoonsado fuliyaan, waxay caan ku tahay sabab - kaas oo dib ii keena Cidhibtiina sare.
My jir ururinta kabaha lahaa qaar ka mid ah midabo kala qurux iyo embellishments strappy, wali waxaan sii yara Lab dhowr sugayaan in aan armaajo ka dhisan xaq u, ama ugu yaraan for this Uubo kala horjeeda in ay lumiyaan ay xajin. Marka Chris oo intaan tegey ayaan on our safar ugu horeysay si wadajir ah u Las Vegas, Waxaan soo buuxiyey oo ku saabsan shan lammaane, curiyo sequins aan dhamaadka lahayn, oo baadad (muuqata, ee madaxayga, Vegas uu macnihiisu yahay xirashada sida showgirl ah.) Sidee badan oo lammaane kuwa aniga kor u xiran? Eber. Halkii, kabo Target aan ku garaacday looxa la taaban karo isbuucii in, oo waxaan xusuusan dareen si mahadisaan waxaan iyaga u lahaa. gabdho aan tiro ku dhibtooday nagu wareegsan ee kabaha madal, curyaamiyey by hadaaqda-lugo jirdil. Waxaan si dhab ah doonayay in ay ku bixiyaan keydka iyo qaar ka mid ah band-aids, gartay labaataneeyada aan hore is ku dhibtoon lahaa inuu iyaga ka garab.
Bisadaha My marnaba ka maqnaan doono on Dabagaale-daawanayay oo kaliya si ay waafajinta yaabaa dhogortooda dib meel, oo aan marnaba diidi karaa ilaa la Chris lahaa waxaan kabo madhay la a 4 wiish inch. Taa darteed marar badan, ee fasaxa ugu wanaagsan ee ay ku tiirsan yihiin saacadaha kabaha iyo kharashka macquul ah oo aan waxba qabaneyn ficil.
Life waa dhan oo ku saabsan sii kordhaya, iyo xiriirka naga caawin kartaa si fiican u fahmaan annagoo ah ayaynu iyo guulaystaan. Sidoo kale, xiriirka ka faa'iideysan karaan is-aaminaadda, daacad ka masuul, iyo islana dhaqmo qaar ka mid ah oo hadda ka dibna. Waxaan rajeynayaa, waxaan dheelitir fiican loo helo of hisses iyo (inta badan) purrs jidka.